Gadzira Mail.app ine hotmail maakaundi pasina kushandisa plugin | Ndinobva mac
Microsoft yakafadza vashandisi vazhinji, yakatsigira POP3 munhoroondo dze Hotmail, chimwe chinhu chinotarisirwa uye chakagamuchirwa zvakanaka.
Vashandisi vebasa retsamba, vanoshandiswa panguva imwechete neiyo meseji yekutumira mameseji MSN mutumwa, pogran gadzira account yako yekushandisa nayo Mail.app pasina kushandisa chero bairira.
Pamberi, kuti uwane kurodha pasi kwemaemail edu kuburikidza tsamba, unogona kushandisa HTTP Tsamba, asi zvakatevera zvinyorwa iyo system kana matambudziko evamwe vashandisi akaigadzira zvine mwero inogutsa mhinduro.
Kuti uishandise, matanho ekutevera ndeaya:
Isu pachedu tinopinda data rakakumbirwa: sevha, zita, password
Zvekuchengetedza tsamba dzinouya, vanotikumbira isu password zvakare, isu tobva taisa password yedu.
Isu tinoenderera mberi ne data kubva kune inobuda tsamba server kusevha ne data rakakumbirwa kubva kuakaundi pfupiso ... uye mune nyaya yemasekondi account yako ichagadziriswa uye iwe unozogona kushandisa iyo tsamba mutengi iwe yaunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Gadzira Mail.app ine hotmail maakaundi pasina kushandisa plugin
Mhoroi, iwe unoziva kugadzira tsamba kuti urangarire data rangu uye haufanire kunyora kero yangu uye password nguva dzese pandinotanga App yeMail?